Isifinyezo se-MX: Ungayakha kanjani i-MX Linux Respin yomuntu siqu futhi efakekayo? | Kusuka kuLinux
Kwabaningi bethu abazithandayo Umhlaba we-Linux, akudingeki nje kuphela ukuthi uyisebenzise, ​​kepha kaningi sisesha i-a Ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux ekahle noma ifuna indlela yokuyakha, kungaba kusuka ekuqaleni ngezindlela zohlobo I-LFS (Linux Kusuka ekuqaleni) noma ngesisekelo sokunye ukusatshalaliswa okukhulu nokuqinile, okufana, UDebian, Ubuntu, uFedora no-Arch.
Impela, lokhu kuvame ukudinga ulwazi olujulile kanye nokusetshenziswa kwe amathuluzi akhethekile esoftware, okungekho noma yimuphi umsebenzisi wekhompyutha ojwayelekile (wehhovisi / wokuphatha) ovame ukuba nayo. Kodwa-ke, i- Ukusatshalaliswa kwe-MX Linux, esikhuluma ngayo njalo, inohlelo lokusebenza oluwusizo, olulula nolusebenzayo olubizwa nge- Isifinyezo se-MX, evumela cishe noma imuphi umsebenzisi we-Linux ukuthi azenzele eyakhe i-MX Linux Respin.
Kuqondwe ngu Phendula, eyodwa bootable (bukhoma) kanye nesithombe se-ISO esifakekayo engasetshenziswa njengendawo yokubuyisela, indawo yokugcina kanye / noma Ukusatshalaliswa kabusha kwe-GNU / Linux phakathi kwabanye. Ngakho-ke, leli thuluzi liyisikhundla samanje nesisebenza kahle esidala, njenge «Remastersys y Systemback», kepha lokho kusebenza kuphela ku- I-distro yomdabu, okungukuthi, I-MX Linux.
Futhi, I-MX Linux njengamanje kufaka nelinye ithuluzi lesoftware elibizwa nge- «MX Live USB Maker (Creador de USB Vivo MX)» inhloso yakhe ukuqopha ifayili le- «Imagen ISO» yenziwe kusuka ku-Operating System yamanje, eyenziwe ngokwezifiso futhi elungiselelwe ye Usuario Linux ngaphezu kweyodwa «Unidad USB».
Ukunwebisa lonke lolu lwazi ku I-MX Linux namathuluzi ayo, sikumema ukuba uchofoze kokulandelayo isixhumanisi kanye / noma ufunde izincwadi zethu ezilandelayo ezihlobene:
1 Isifinyezo se-MX: Ithuluzi Lokuthwebula
1.1 Izinyathelo nezincomo zangaphambi kokusebenzisa isifinyezo se-MX
1.1.1 Izinyathelo ezedlule
1.2 Ungasisebenzisa kanjani isifinyezo se-MX?
Isifinyezo se-MX: Ithuluzi Lokuthwebula
Izinyathelo nezincomo zangaphambi kokusebenzisa isifinyezo se-MX
Izinyathelo ezichazwe nezinconyiwe ngezansi ngeze- a Umsebenzisi we-MX Linux ngemuva faka, lungiselela, lungiselela futhi wenze ngendlela oyifisayo su I-Distro MX Linux ngokuthanda kwakho, ungakha ngempumelelo ifayela le- Phendula okuvumela, phakathi kwezinye izinto, buyisela ngokushesha kuyafana kunoma yisiphi isimo esivumela, ukugwema ukusebenzisa iDistro yoqobo kusuka ekuqaleni futhi ukuqala kabusha futhi. Noma uma kwenzeka, ufuna yabelana ngempendulo yakho nabanye, nganoma yisiphi isizathu, njengokudala umphakathi omzungezile.
Ngokwakho susa konke okungadingekile: Ngishiye kuphela kumafolda akhona endlela «/ home /…», lawo mafayela womuntu siqu noma angawami engifuna ukuwagcina kanye / noma ukuwabelana nabanye. Khumbula ukuthi amafayili ambalwa afakiwe amancane i-ISO ekhiqizwayo ezoba yincane. Okufanayo kusebenza kuzinhlelo zokusebenza, okungukuthi, ukufaka okumbalwa okufakiwe noma okuncane okukhona, kuzoba ngcono ukugcina usayizi we-ISO ofanele wokulanda nokusebenzisa kuma-USB Memory Drives amancane.
Susa ngokuzenzakalela konke lokho okweqile: Ngale njongo, ukusetshenziswa kwalezi zinhlelo ezilandelayo ze-MX Linux nezinye izinhlelo zangaphandle kuhle: I-MX Cleanup (MX Cleaning) neBleachBit. Sebenzisa zombili ngokunconywayo kumthamo wokuhlanza ophakeme, futhi kokugcina zombili kumodi yakho ejwayelekile yomsebenzisi njenge "impande".
Khubaza / Khubaza zonke lezo zinsizakalo ezingadingekile: Ngale njongo, ukusetshenziswa kwalezi zinhlelo zokusebenza ze-MX Linux nezinye izinhlelo zangaphandle kuhle: Uhlelo lwendabuko "iSession and Start" le- "Imenyu Yokulungiselela" ye-XFCE nohlelo lwangaphandle iStacer kunketho yalo "Izinsizakalo" . Ngaphezu kwalokho, iStacer isivumela ukuthi senze iphutha elihle kakhulu lamafayela we-log (* .log) kunketho yawo ye- "System Cleanup".
Gcina izilungiselelo zomsebenzisi nokwenza ngezifiso: Uma kwenzeka ufisa ukugcina nokuthola ingxenye yengxenye noma konke okwenziwe kumsebenzisi we-MX Linux okwenziwe kubasebenzisi abasha abazokwakhiwa ku-Respin, kufanele ubeke amafolda namafayela adingekayo asendleleni «/ home / myuser / »ngaphakathi kwendlela« / etc / skel ». Ngokwesibonelo:
Noma yikuphi okunye ocabanga ukuthi kudingekile, isibonelo: .conky, .fluxbox, .kde, phakathi kwabanye.
Noma yikuphi okunye okubona kudingekile, ngokwesibonelo: .wbar, .xinitrc, .xscreensaver, phakathi kwabanye.
Ungasisebenzisa kanjani isifinyezo se-MX?
Usar Isifinyezo se-MX kulula kakhulu. Uma sekuvuliwe (kwenziwa), kukhombisa okulandelayo kusikrini sayo sokuqala, esingabonakala esithombeni esisheshayo esiphezulu:
Isikhala ku / (impande): Ukukhombisa ukuthi kungakanani isikhala okuhlala kuso i-OS yonke ukucindezela.
Isikhala samahhala e / ekhaya: Ukukhombisa lapho isikhala samahhala sitholakala ku-OS Home
Indawo yesithombe: Ukukhombisa indlela ezenzakalelayo kanye / noma ukukhombisa eyakho, lapho kuzokwakhiwa khona i-ISO.
Igama lesithombe: Ukukhombisa igama elizenzakalelayo kanye / noma ukukhombisa elakho, ukuze kudalwe i-ISO.
Esikrinini esilandelayo, njengoba kungabonakala esithombeni esingenhla ngokushesha, kuvunyelwe ukukhombisa ukuthi yimaphi amafolda womsebenzisi owenziwe angafuni ukwenziwa isipele, uma kwenzeka inketho ikhethiwe «Ama-akhawunti alondoloziwe (ukwenza isipele somuntu siqu). Le nketho ivumela umsebenzisi owenziwe ukuthi aqhubeke nokurekhodwa futhi atholakale kufayela le- Phendula Kokubili kwimodi «En vivo» (bukhoma) njengalapho ufaka okufanayo.
Uma kwenzeka, inketho ikhethiwe "Kubuyiselwe ama-akhawunti okuzenzakalelayo (ukusabalalisa abanye)", ayikho i-akhawunti yomsebenzisi ezogcinwa (ikopishwe) futhi ngokuzenzakalela, le nketho izosetha kabusha amaphasiwedi we "Idemo" y "Umsuka" kulabo abafakwe ngokuzenzakalela ku- I-MX Linux.
Futhi, Isifinyezo se-MX inikeza izikimu zokucindezela ezilandelayo: lz4, lzo, gzip ne-xz, eyokugcina isebenza kahle kakhulu lapho kucindezelwa amafayela azofakwa ku-ISO.
Kokunye, ngokucindezela ifayela le- inkinobho «ngokulandelayo» i-ISO izokwakhiwa futhi singayishisela kwi-DVD noma i-USB sisebenzisa I-MX Live USB Maker funa I-MX Linux, noma UBalena Etcher, Umbhali Wezithombe zikaRosa, uVentoy noma i umyalo "dd" kusuka kunoma yimuphi omunye Ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux, noma usebenzisa Rufus funa Windows.
Note: Uma kwenzeka ufuna hlela (ngezifiso) izinketho ze qala imenyu (ibhuthi) kweMpendulo entsha ifayela kufanele lihlelwe hlela ifayela le-mx-snapshot.conf yini esemzileni "/ njll" bese ubeka i- inketho "edit_boot_menu" en "Futhi kunjalo". Lokhu kuzosho ukuthi kuzohlala kukhona iwindi lokuhlela le- ifayela «isolinux.cfg» lapho singawahlela khona, ukuze kuthi lapho i-Respin iqala, ngokwesibonelo, kuphume igama elisha le-Respin yethu yangokwezifiso, esikhundleni se, "MX Linux" okuza ngokuzenzakalela.
Uma ufuna ukwazi kabanzi nge Ukuphendula kwe-MX Linux chofoza izixhumanisi ezilandelayo:
Isithangami se-MX Linux - Izimpendulo ze-MX Desktop (Uhlu)
I-MX 19.2 Base Edition Impendulo yomuntu siqu
Sourceforge - Izimpendulo Zomphakathi
Futhi lapha, ukufunda kabanzi nge Ukuphendula okungekho emthethweni kwe-MX Linux kubizwa Izimangaliso, iphrojekthi ethathe isikhundla sangaphambilini ebizwa ngokuthi Abavukuzi kusekelwe Ubuntu 18.04 usebenzisa I-Systemback.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" mayelana nethuluzi lomdabu I-MX Linux shayela «MX Snapshot», okuyinsiza enhle kakhulu yesoftware evumela ukudala i-MX Linux Respin yomuntu siqu futhi efakekayo, okusho ukuthi, isithombe se-ISO (bukhoma) esingasetshenziswa njengendawo yokubuyisela, indawo yokugcina kanye / noma ukusabalalisa; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Isifinyezo se-MX: Ungayakha kanjani i-MX Linux Respin yomuntu siqu futhi efakekayo?
Ngisho, angikwazi ukudala izithombe zanoma iyiphi i-linux distro efakwe ku-pc yami?
Sanibonani, RocoElWuero. Cha, leli thuluzi lidabuka ku-MX Linux, futhi alakhelwanga ukusebenza kwamanye ama-Distros. Okungukuthi, uma kwenziwe, kungaba yinto emangalisayo, ngenxa yokusebenza kwayo okuhle nokusebenziseka kwayo.
URonald K. kusho
habe das mit dem Schnappschuß schon begriffen und schon einige erstellt, was auch wunderbar funktioniert hat unter mx18.3 konnte ich die ISO Datei auch prima auf eine andere Festplatte installieren ohne das es Probleme gab, - - Aber unter MX 19.3 kann ich zwar a Schnappschuß erstellen und erhallte dann auch eine funtionierende ISO Datei die auch startet und bis zu einem Punkt abläuft, wo mich das Installprogramm nach Loginname und Passwort fragt, was ich auch eingebe und dann erscheint ein Dollerzeichen $, ichkt i-nicht weiter… ungathola i-gesagt nur bei mx19.3 bei
mx 18.3 lauft alles bis zum Destoppbildschirm weiter dann erscheint das Install brogramm und ich kann es auf Festplatte installieren - bei mx 19.3 geht das nicht hat nicht einmal geklappt was soll ich da beim Dollerzeichen eingeben ??? I-Bitte helft mir ich ithola inani le-MX Linux einfach. UDanke
Phendula uRonald K.
UGrüße, uRonald. Ich habe is nicht ganz verstanden. Ich habe jedoch mein eigenes Respin (live Snapshot snapshot) von MX Linux 19.3, genannt MilagrOS, and es funktioniert ohne Probleme. Ich weiß nicht genau, was Ihr Problem ist, aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn Ihr Respin Sie irgendwann nach einem Kennwort fragt, es das Standardkennwort sein sollte, eMX Linux, das, glaube ich, «demo» oder «root» ist, andernfalls sollte es das sein, das Sie dem Benutzer zugewiesen haben, der vor dem Respin angelegt wurde. Ich weiß nicht, ob is nützlich sein wird, aber dies ist die URL meines Respins, falls Sie is erforschen und sehen möchten, wie is nützlich sein kann: https://proyectotictac.com/distros/
Ngiyabingelela, Ronald. Ngangingaqondi kahle. Kodwa-ke ngine-respin yami (isifinyezo esibukhoma nesifakekayo) se-MX Linux 19.3, esibizwa ngeMilagrOS futhi siyangisebenzela ngaphandle kwenkinga. Ngangingeke ngazi kahle ukuthi iyini inkinga, kepha ngicabanga ukuthi uma kwesinye isikhathi i-respin yakho ikubuza iphasiwedi, lokhu kufanele kube yiyo eza ngokuzenzakalela, ku-MX Linux, engicabanga ukuthi yi- "demo" noma " impande "Uma kungenjalo, kufanele kube nguwe onikeze umsebenzisi owenziwe ngaphambi kokuphefumula. Angazi noma kuzoba wusizo yini kuwe, kepha le yi-url yokuphefumula kwami ​​uma kwenzeka ufuna ukuyihlola bese ubona ukuthi ingasiza kanjani: https://proyectotictac.com/distros/
UFedora 34 uhlela ukusebenzisa iPipeWire ngomsindo esikhundleni sePulseAudio